Displaying 71-80 of 364 results.
भारतमा ५४ वर्ष बिताएपछि स्वदेश फर्किदा....
एजेन्सी, २९ माघ । भारतमा पाँच दशक बिताएका भूतपूर्व चिनियाँ सैनिक वाङ छी शनिबार चीन फर्केका छन् ।
आफ्नो छोरा, छोरी अनि बुहारीसंगै चीन पुगेका उनी आफ्ना आफन्त भेटेपछि भावुक बने । ५४ वर्ष पछि स्वदेश फर्केका उनका आमाबुबा बितिसकेका छन्। उड्नु अघि आफ्ना द
डिभी चिठ्ठा बन्द गर्ने बिधेयक अमेरिकी स‌ंसदमा पेश
एजेन्सी, २८ माघ । अमेरिकाका दुई सिनेटरले संसदमा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी चिठ्ठा) बन्द गर्ने विधेयक अमेरिकी संसदमा पेश गरेका छन् । सिनेटर टम कटन र डेविड पेरड्युले अमेरीकामा रहेको आप्रवासीको संख्या पचास प्रतिशतले कटौती गर्ने उदेश्यले यो विधेय.. .. ..
बाथरुममा टिभी हेर्न रुचाउने ट्रम्पका अनौठा ६ व्यवहार
२८ माघ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले व्ह्वाइट हाउसको स्रोतको आधारमा हालै ट्रम्प बारे केही रोचक तथ्यहरु बाहिर ल्याएको छ । पढ्नुस् ट्रम्पका रोचक प्रसंग :-
१. नरम रुमाल नभएकाले रिसाए ट्रम्प–‘एयरफोर्स वन’मा हुँदा राष्ट्रपतिको लागि राखिएको रुम
‘भारतले ‘गोप्य आणविक सहर’ बनाउँदै’
२८ माघ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारमाध्यमसँगको नियमित कुराकानीमा भारतले ‘गोप्य आणविक सहर’ निर्माण गर्न लागेको र त्यहाँ आणविक हतियार भण्डारण गर्न लागेको बताएको छ ।
यसरी बन्ने गोप्य आणविक सहरले एसिया क्षेत्रको सुरक्षा स्थि
ग्रीन कार्ड वितरणमा कडाइ गर्न प्रस्ताव पेश, लाखौंले अमेरिका छोड्नुपर्ने !
वासिंटन, २७ माघ । अमेरिकामा ग्रीन कार्ड वितरण प्रक्रिया कडा तुल्याउन ट्रम्प प्रशासनले आवश्यक तयारी थालेको छ ।
राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आप्रवासीहरुको आगमन रोक्न विशेष पहल गर्ने यसअघि नै बताइसकेका थिए । हालै दुई सिनेटरले ग्रीन कार्ड वित
ट्रम्पले सिफारिस गरेका जेफ महान्यायाधीवक्ता बन्ने निश्चित
एजेन्सी, २७ माघ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका जेफ सेसन्स् अमेरिकाको महान्यायाधीवक्ता बन्ने निश्चित भएको छ । अलाबामाका सिनेटर सेसन्सलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने पक्षमा सिनेटले बहुमत दिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका ६ कर्मचारीको गोली हानी हत्या
एजेन्सी, २७ माघ । अफगानिस्तानको इस्लामिक स्टेट (आइएस)को एक हतियारधारी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका ६ जना कर्मचारीको हत्या गरेको छ ।
हतियारधारीहरुले जोजजान प्रान्तमा रेडक्रसका कर्मचारीमाथि आक्रमणपछि गोली हानी हत्या गरेका हुन् । कर्म
भारतका ५९ कमाण्डो एकैपटक बेपत्ता !
२५ माघ । भारतमा अचानक एकसाथ ५९ कमाण्डो बेपत्ता भएका छन् । श्रीनगरमा आफ्नो तालिम सकेका उनीहरु बेपत्ता भएपछि निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ ।
केन्द्रीय रिजर्ब प्रहरी बल (सीआरपीएफ) काउण्टर नक्सल एलिट युनिट कोब्र
सात मुश्लिम देश किन ट्रम्पको निशानामा पर्दैनन् ?
२५ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको सात मुश्लिम देशका नागरिक अमेरिका आउन नपाउने आदेशले भ्रमको स्थिति सिर्जना भएको छ । ती सात मुश्लिम देश अमेरिकाको साथमा व्यापारको हिसाबले राम्रो सम्बन्ध भएका मुलुकको सुचीमा छैनन ।
एकताको अन्तिम तयारीमा चार माओवादी पार्टी
काठमाडौ, ५ जेठ । एकीकृत माओवादी लगायत चार माओवादी पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
भोलि हुने पार्टी एकताको औपचारिक कार्यक्रमका लागि चार ओटै पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई कार्यविभाजन गरेर परिचालन गरिएको एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानक